China iqoqo lekhwalithi eliphakeme elenziwe ngokwezifiso ledeski lomkhiqizo Umkhiqizi nomhlinzeki | I-Huaguang
Umagazini iqoqo lekhwalithi eliphakeme elenziwe ngokwezifiso eliphakeme
Orrugated Mi-agazine File Box
Ukupakisha Imininingwane: ama-PC amahlanu ku-polybag noma imfuneko sakho
Ci-orrugated umagazini ifayela box kumane nje kungamabhokisi amaningi wefayela. Ibhokisi elivulekile elisetshenziswa kakhulu ngabasebenzi basehhovisi ukugcina nokuhlukanisa. Kulula ukugcina nokuthatha amafayela.
Imvamisa kunemibhalo eminingi ehhovisi. Ezinye zazo zibalulekile futhi zisetshenziswa njalo. Kukhona izinkomba, okukhulunywa ngazo ngezikhathi ezithile; Ezinye azidingeki kaningi futhi zivame ukuhlala zingenzi lutho. Uma yonke le mibhalo ihlanganiswa, iyahleleka futhi akulula ukuthi siyibheke. Yilapho lapho kufakwa khona i-rack.
Sidinga zonke izinhlobo zokuhlukaniswa kwemibhalo, ngokuya ngokubaluleka nobuningi bokusetshenziswa kubabeke kumafayili ezindawo ezahlukahlukene, kanye nelebuli ehambisanayo, efana naleyo: yazisa amafayela wesigaba, amafayela wedatha, ngefayela lokurekhoda nokugcina umlando amafayela, njll., ngakho-ke ukusebenzisa kwethu kuzocaca shazi, thola ifayela olidingayo okokuqala, kuthuthukise kakhulu ukusebenza kahle komsebenzi wethu. Ngasikhathi sinye, iraki lefayela elicocekile lingakhombisa ukunambitheka nekhwalithi yokusebenza komuntu, imvelo ecocekile nayo iyasiza ekuthuthukiseni umdlandla womsebenzi wethu.
Ngokwalokho okubhaliwe, iraki lefayela lingahlukaniswa ngezigaba ezintathu ezilandelayo:
1: Ibhokisi lefayela likamagazini. Ibhokisi lefayela likamagazini elinamanani anentengo enhle nokuvikelwa kwemvelo, okudumile ezimakethe zase-Europe naseMelika.
2: Ifayela lepulasitiki, lolu hlobo lwekhwalithi yokukhanya kwefayela, inani lihle kakhulu, lihlala emakethe enkulu kunazo zonke, kepha le nto yokufakwa kwefayela ayinamandla, kulula ukuyiphula;
3: Ifayela lamapulangwe, lolu hlobo lwefayela lubonakala luhle futhi luphana, futhi luhlala isikhathi eside. Kudume kakhulu kubasebenzi basehhovisi;
4, Uhlaka lwefayela le-Iron, ukwakheka kohlaka lwefayela kunokwethenjelwa futhi kuqinile, kuzonikeza umuntu umuzwa ohlanzekile futhi omuhle.
Izinto zokwakha, amaphethini namasayizi angenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zezivakashi.
Langaphambilini Ibhokisi lokugcina iphepha lasehhovisi noma lasekhaya elinamandla amakhulu lingasongwa
Olandelayo: Amalebula amabhodlela angenamanzi, amafilimu alula noma ama-matte anama-roll
High amakhadibhodi ngokwezifiso ukuphrinta edeskini ...